အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: May 2008
တဲကလေးထဲက လူကြွက်စုတ်လေး သုံးကောင်။
နားဝ ဆူညံ မြစ်ညှာကမျော..
မြစ်ထဲစီးတဲ့ ရေသံက ဘ၀ဂ်ညံ။
အဘ လက်ဖွဲ့တဲ့ နွားကြန်စုံ တရှဉ်း
ရေပြင်လွှာ အတိဖြစ်ခဲ့ ရပြီ..
မသဒ္ဓါ (၅။ ၂၈။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:14 AM0comments
ဤစာမှာ မသဒ္ဓါထံ ပေးပို့ လာသော အကြံပေးစာဖြစ်ပါတယ်။။အားလုံးသိစေရန်ဖော်ပြလိူက်ပါသည်။ ပေးပိူ့သော စေတနာရှင်..အမည်မသိမောင်လေးအားကျေးဇူုးပါ.
လူမှုရေး စိတ်ဓါတ် ၊ စွမ်းရည် သတ္တိ ရှိသော မြန်မာ လူငယ်များသို့
လူမှုရေးစိတ်ဓါတ် ၊ စွန်းရည်သတ္တိ ရှိသော မြန်မာလူငယ်များသို့ ပြည်တွင်းက (အထူးသဖြင့် မုန်တိုင်းဒဏ် မခံရသော မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းမှ) ကျန်းမာကြံခိုင်သော လူငယ်များ ကိုယ်ပိုင်ရိက္ခာ (၁၀) ရက်စာခန့်ယူကာ ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ်ဖြင့် (၅) ယောက်တစ်ဖွဲ့ ၊ (၁၀) တစ်ဖွဲ့ စုဝေးပြီး ၊ မုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးခါစ မှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဆေးဝါးများယူဆောင်ကာ အစိုး ရ၊ NGO အဖွဲ့ အစည်းတို့ မရောက်နိုင်သော ဒေသများ၊ အကူအညီ လစ်ဟာနေသော ဒေသ များသို့စေတနာထား၍ စွန့်စွန့်စားစား အမြန်ဆုံးသွားရောက် ကူညီသင့် ။ ကင်မရာတွေလဲ ယူသွားကြ။ ရေဒီယို တွေ ယူသွားကြပါ။
အမျိုးသမီးငယ်များ ၊ ကျောင်းပိတ်နေဆဲ ကျောင်းသူများ မိမိ ကျေးရွာ ၊ရပ်ကွက် ၊ မြို့နယ် အတွင်း တက်တက်ကြွကြွ အလှူငွေများ ၊ အ၀တ် အထည်၊ စားစရာများ အပင်ပန်းခံ လိုက်လံအလှူခံကာ ရယက၊ မယက ရုံးများသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းကြပါ။
http://www.countrybuilders.blogspot.com/ တွင် ရေးသားထားသော အောက်က အကြံပြုချက်လေးတွေ ကို လက်ကမ်းစာစောင်အဖြစ် ပြုလုပ်ပြီး ကိုယ်နှင့် မကွာယူသွားကြပါ ၊ ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲ မှာမချိအောင်နာ ပေမယ့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုက အရမ်းကို များလွန်းနေတော့ အကူအညီပေးရတာ အားမရနိုင်ဖြစ်ကြ ရပါတယ်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ပြီးတဲ့ အခါမှာ သိသင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အချက်ကလေးများကို လေ့လာ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ တတ်အားသရွေ့ ဖြန့်ဝေပေးကြပါခင်ဗျား။
နောက်တစ်ခု ပန်ကြားလိုတာ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက် တဲ့အခါမှာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမဲ့ လက်စွဲ စာအုပ်ငယ်ကို ရှာဖွေပြီးတော့ ဘေးက Pane မှာ Link လုပ်ပေးထားပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် Chapter တစ်ခုစီလောက် မြန်မာလိုပြန်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဆီကို ပို့ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အကျဉ်းချုပ်ကို Print ထုတ်ပြီး အုပ်ရေ ၁၀၀၀၀၊ ၂၀၀၀၀ လောက်ဝေနိုင်ရင်လဲ အကျိုး ရှိနိုင်မယ် ယူဆလို့ပါခင်ဗျာ။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ပြီးပြီးချင်းမှာ အရေးအကြီးဆုံး လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေကတော့ သောက်ရေသန့်၊ ရိက္ခာထောက်ပံ့မှု၊ ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ဆယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမယ်၊ အစားအ သောက် တွေကို ဘယ်လိုပြင် ဆင် မှုပြုရမယ်၊ ရေတွင်းရေကန်တွေကို ဘယ်လိုပိုးသတ်ရမလဲဆိုတာတွေ၊ တစ်သက်လုံးအမာရွတ်ထင်သွား စေနိုင်တဲ့ ကပ်ဘေးဒဏ်ခံ ပြည်သူတွေခံစားလိုက်ရတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ဘယ်လိုကုစားပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာ တွေကို လေ့လာ အသုံးချနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် သတိပြုသင့်သည့်အချက်များ (မှတ်ချက်။ ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း သာ ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်သည်ထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်လွန်းသည်ထင်ပါက ပယ်နိုင်ပါသည်)
*ထိုရေများအတွင်းတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှား မြောက်မြားစွာပါဝင်ပြီး ထိခိုက်ရာမှ ရရှိသော အပွန်းအပဲ့ ကလေးများအတွင်းသို့ပင် ရောဂါပိုးဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်၊
စည်သွပ်ဘူးများ ၊ အသား၊ ငါး၊ အသီးအရွက်နှင့် ဖျော်ရည် နို့အစရှိသည်။ ကယ်လိုရီနှင့် စွမ်းအင် များစွာပါသော အစားအစာများမှာ Peanut Butter, ဂျယ်လီ၊ မုန့်ကြွတ် နှင့် တောင်တက်သမားများ အသုံးပြုကြသော မုန့်ခြောက်များ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ရယ်ဒီမိတ်ကော်ဖီ၊ ချိုချဉ်၊ ဘီစကွတ်စသော မုန့်များကို စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေ ရန်အတွက် စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ဗီတာမင်ဆေးပြားများနှင့် ပရိုတိန်း အစားထိုးဆေးပြားများ ကိုလည်း ပေးပို့နိုင်ပါ သည်။ ဒါမျိုးအစားအစာတွေ ကိုရှောင်ပါ။
စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရေဓာတ်ဖယ်ထားသော အစားအစာများ။ (အစာခြောက်များ)
ထိုကဲ့သို့သော အစားအစာများ အားချေဖျက်ရန်ရေဓာတ်များစွာလိုအပ်ပါသည်။
*အစေ့မှရသည့် အစားအစာများ၊ (ဆန်နှင့်ပဲအစရှိသည်)။
*ပုရွက်ဆိတ်အစရှိသည့် အင်းဆက်များ လာရောက်စားသုံးနိုင်သည့် အစားအစာများအား*
*လူတစ်ဦး သောက်သုံးရန်နှင့် အစားအစာအတွက် ပြင်ဆင်ရန် တစ်နေ့လျင် အနည်းဆုံးရေ (၁) ဂါလန်လိုအပ် ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်သယ်များ၊ ကလေးငယ်များ၊ အသက်အရွယ်ကြီးသူများနှင့် လူမမာများ အတွက် လိုအပ်ချက်မှာ ထို့ ထက်ပိုပါသည်။ ပလပ်စတစ်ပုလင်းများနှင့် ပုံးများအတွင်းတွင် ရေကိုသိုလှောင်ထားပါ။ သဘာဝ ဘေး ဒဏ်ခံနေရသည့် ကာလတစ်လျောက်လုံး အတွက် အနည်းဆုံး (၃)ရက်စာ ရေရှိနေရန် လိုအပ်ပါသည်။
ရေသန့်စင်ရန်အတွက် ရေသန့်ဆေးပြားများနှင့် Chlorine bleach အား အနံ့ထည့် မထားပါက အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ရောစပ်ရမည့် အချိုးအစားမှာ တစ်ဂါလန်လျင် ၁၆စက် ၊ သို့မဟုတ် ရေ ၅ ဂါလန်အား Bleach လက်ဖက်ရည် ဇွန်းတစ်ဇွန်း ရောစပ်ပြီး သမစွာမွှေလျင် ထိုရေအားသောက်သုံးနိုင် ပါသည်။
နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များရှိ ကုန်စုံဆိုင်များတွင် လွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ရေကူးကန်များတွင် အသုံးပြု သည့် ဟိုက်ပိုကလိုရိုက်နှင့် ကလိုရီနိတ်တက် လိုင်းမ် အစရှိသည် တို့ကိုလည်း ရေသန့်စင်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်လက်သန့်စင်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်ပါသည်။
သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကြုံတွေ့နေရသူများအတွက် ရေချိုးရန်မှာ မဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် ကိုယ်လက် သန့်စင်ရန် အတွက် နည်းလမ်း များရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:26 AM0comments
မသဒ္ဒါရဲ့ စီဘောက်ထဲက တာဝန်သိ၊ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ စိုးရိမ်တကြီးကြိုတင်သတိပေးချက်
မြန်မာပြည်မှာ မုန်တိုင်းပြင်းထန်မယ်ကို ပြည်ပ က လူတွေက သိပေမယ့် ပြည်တွင်းက လူတွေ မသိခဲ့ရရှာပါဘူး၊ဘလော့တစ်ခုက စီဘောက်ထဲမှာ မြန်မာတစ်ချို့က စိုးရိမ်တကြီး (၂) ရက် ကျော်ကြိုတင် သတိပေးခဲ့တာပါ ။ဒါပေမယ့် လူတိုင်းနီးပါးဟာ အမှတ်မဲ့ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းနောက်ဆုံးသတင်းတွေကို 01667766 မှာမေးနိုင်ပါတယ် သတင်းရရင် လက်ဆင့်ကမ်း ပေးကြပါအုံး
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းသည် မိန်းမလှကျွန်းနောက်ဖက်မိုင် ၉၀ခန့်တွင်ရောက်ရှိနေပါပြီ ပိုပြီးအားကောင်းလာ နေပါ သည်။ အရှေ့ဘက်သို့ လျှင်မြန်စွာရွေ့နေသည်
ခန့်မောင်: ရန်ကုန်တွင်လေးပြင်တိုက်က ဆိုင်ဘုတ်ကြီများ တုံးလုံးလဲသွားနိုင်သည် မုန်တိုင်သတင်း ကိုဒီနေ့တောက်လျှောက် စောင့်ကြည့် ပေးကြပါ လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါ
ခန့်မောင်: မော်တင်စွန်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်မည် ရန်ကုန်အနီးသို့ ဒီညတွင်ဖြတ်လိမ့်မည် ဧရာဝတီတိုင်း၏ ပင်လယ်နှင့် ထိစပ်နေသော အပိုင်းများ စိစိညက်ညက်ကြေသွားနိုင်သည်
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းစင်တာလမ်းကြောင်းဦးတည်ရာ၏ ညာဘက်တွင် လေမှတွန်းတင်ထားသောလှိုင်းလုံးကြီးများက ကမးခြေသို့ဝင် ဆောင့်တတ်သည် ယခု လှိုင်းများ ၂၇ပေထိမြင့်မည်ဟု ခန့်မှန်းနေသည်
ခန့်မောင်: ၃ရက်နေ့ နေ့လည်တွင် ကယားနှင့်ရှမ်းတောင်ကြားသို့ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ ဖျက်ဆီးအားကြီးမားမည်ဖြစ်သောကြောင့် လမ်းကြောင်းကျနေသော မြို့ရွာများသို့ လက်လှမ်းမီသလောက်ကြောင်းကြားသတိပေးကြပါ
ခန့်မောင်: မုန်တိုင်းဗဟိုတွင်လေတိုက်နှုန်းတနာရီ မိုင်တရာကျော်လာပြီဖြစ်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ အနောက်ဘက်မိုင် ၃၇၀တွင်ရောက်ရှိနေပါပြီ။ မူလခန့်မှန်းထားသော ၂ရက်နေ့သန်းခေါင်ယံထက်စောမည်ဖြစ်သည်။
ကယ်ကြပါအုံး: Nargis လို့ခေါ်တဲ့မုန်တိုင်း ဗမာပြေကိုဝင်မယ် ရန်ကုန်နားကဖြတ်မယ် အပျက်အစီး အထိအခိုက်များမယ်လို့ သိရတယ် အားလုံးကိုအကြောင်းကြားပေးကြပါ
May 7, 2008 10:03 AM
မသဒ္ဓါ တာဝန်သိ တာဝန်ကျေ ပြည်သူပါ..သတင်းရလျှင်ရချငိးဘဲ..အာဇာနည်နဲ့ကိုမိုးသီး ဘလောက်များ ပေါ်သို့ မုန်တိုင်း သတင်း ကို တိုက်ရိုက်တင်ပေးပါတယ်..ဘာလိုလည်း ဆိုတော့ မသဒ္ဓါ ဘလော့ ဆီထက် စာရင် ဟိုဘက်ကို သွားတဲ့လူတွေက များလိူ့ပါ. ဘလော့ဂါထဲမှာ မသဒ္ဓါ မုန်တိုင်း ကိစ္စ သတင်း update တွေ ရော..ရသမျှ အချိန်မီ ရသမျှ တင်ပေးပါတယ်.။
အပြစ်တင်လိူက တင်ပါ မောင်ငယ်။။ တကယ်လို့မသဒ္ဓ့ါ တာဝန်မကျေတာ ရှိခဲ့ရင်။
ခလေးတယောက်လာရေးတဲ့..အမကြီးကို အားကိုးပါတယ် မသဒ္ဓါ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကြောင့် မသဒ္ဓါ..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူဘဲ ပုတ်ထုတ် ပုတ်ထုတ်။ဘယ်သူဘဲ ကဲ့ရဲ့ ဆိုဆို၊ ချစ်ရတဲ့ မောင်ငယ်ညီမငယ် အားလုံး ကို လစ်လျှုရှူ ထွက်မပြေး နိူင်ခဲ့ပါဘူး.မသဒ္ဓါက နိူင်ငံရေးသမားလည်း မဟူတ်။ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် လည်းမဟုတ်။ ခံစားပြီးသာ ကဗျာရေးသူ သာဖြစ်တဲ့အတွက်..မသဒ္ဓ့ါရဲ့ပြည်သူများအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှု အတိုင်းအတာ.စိတ်ကျေနပ်စရာ မလုံလောက်ခဲ့ဘူုး ဆိုခဲ့ရင် အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ခွင့်လွတ်ပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:22 AM4comments
မိုး နဲ့ကံဆိုးမ အလဲထိုး ခံရခဲ့ပြီ။
ရေမြုပ်နေတဲ့ ဒို့ လယ်..
တဲကလေး ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ရယ်..
မျက်စိသူငယ် ခလေးငယ်က နှစ်ယောက်..
ဘယ်မလဲ ပျို့ မောင်ကြီး..
ခလေးတွေ အတွက် အစာရှာသွားပြီး
သေမင်းတမာန် မုန်တိုင်းရဲ့ ပန်းချီ။
မုတ်သုန်ဦး ရဲ့ မုန်တိုင်း။
မသဒ္ဓါ ( ၅။၅။ ၂၀၀၈) မုန်တိုင်းကြားမှ မ်ိန်းမသားများ အတွက် ဂရုဏာ ကိုယ်ချင်းစာနာမှူများဖြင့်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:49 AM2comments
လူ့ အဖွဲ့ အစည်းနှင့် ညီညွတ်ရေး၏ စွမ်းပကား
အတ္တ နဲ့မောဟ
လူနဲ့ လု့ အဖွဲ့အစည်း
မနေနိုင် တစ်ယောက်တစ်ဦး ထီးထည်း။
အဓမ္မနဲ့ဓမ္မ။
ဘီလူးစည်း နဲ့ လူ့ စည်း။
လောက ကို အလှဆင်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:14 AM0comments